Ihe ngosi: Ibanye na ndi mmadu - The Business Edition | Martech Zone
Wednesday, July 18, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Nyaahụ m kwuru na Associationtù Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Azụmaahịa International na Indianapolis. Ọnọdụ nke ndị na-ege ntị agwakọtara n'etiti obere na nnukwu ụlọ ọrụ, yana ndị ọchụnta ego gbasaa mgbasa ozi ọha na eze site na newby ndị ahịa ahịa nwere mmekọrịta.
Oge ọ bụla m kwadebere ihe ngosi, m na-aga azụ site na akụkọ ihe mere eme nke n'ihu na m mere n'oge gara aga… idobe slides na ozi ndị na-adịkwaghị-adọ, na-agbakwunye ọhụrụ slides maka isiokwu nke oge. Ọ bụ ezie na anyị nọ na njedebe nke ihe na-eme na mgbasa ozi mgbasa ozi, akụkọ agbanweela n'ụzọ dị egwu. Otu isi ihe bụ mmekọrịta azụmahịa gị na atụmanya na ndị ahịa ugbu a bụ atụmanya.
Mgbasa ozi ejiri mee ka iwe nke onye ọ bụla bịara abịa. Taa, ọ bụ ezie na ọ bụghị mgbe niile ka a nabatara ya, enwere ndị na-eme mkpesa banyere mgbasa ozi na nkwalite dị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. N'ezie - ụfọdụ ọnụ ọgụgụ anyị nyere na-egosi na enwere atụmanya ego na onyinye sitere n'aka ọtụtụ mmadụ. Ha n'ezie chọrọ ụlọ ọrụ na-ere!
Strategyzọ ọzọ nke gaara abụ ikwulu Chineke bụ ụgwọ afọ ojuju. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị anaghịdị amata mgbe a na-akwụ ụgwọ ọdịnaya maka… echiche nke ọdịnaya akwụgo dọtara oke nkatọ ogologo oge. Emeela m onye na-akwado ha niile. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị edemede na-arụ ọrụ ka mma nke na-egosipụta mbọ nke azụmaahịa - karịa ụlọ ọrụ n'onwe ha. Mepụta ọdịnaya siri ike - belụsọ na ọ bụ ọrụ gị. Ndị nyocha na ndị dere ọdịnaya anyị ejirila mmekọrịta rụọ ọrụ dị ịtụnanya.
Ihe agbanwebeghị bụ na ọ ka na-enye ohere dị ịtụnanya maka ụlọ ọrụ nwere obere akara ngosi na obere mmefu ego azụmaahịa iji wuo azụmahịa dị ịtụnanya. (Ugbu a ụlọ ọrụ Gụnyere!) Ihe ọzọ nke agbanwebeghị naanị, mana o siri ike karịa, na-ewu ma na-akwalite ọdịnaya gị na usoro mgbasa ozi mmekọrịta. N'ihi gịnị? Maka na asọmpi gị na nnukwu azụmahịa mechara nwude.
Isetịpụ atụmanya maka ọchụchọ ma ọ bụ mmekọrịta mmadụ na-esiwanye ike n’oge a n’ihi na teknụzụ, nyiwe na asọmpi niile na-agagharị. N'oge gara aga, inweta ikike na iwulite azụmahịa ọha na eze bụ - amaja m kwuo - mfe. Oge ndị ahụ agafeela, n'agbanyeghị. Enweghị ụzọ mkpirisi. Asọmpi a siri ike na ịkwesịrị ịrara ihe kacha mma iji wuo mmemme gị. The uru nke ichekwa ego ka na-na a oké atụmatụ… ọ bụ naanị ike ugbu a inweta.
Tags: pptngosielekọta mmadụ mediamgbasa ozi mgbasa oziusoro mgbasa ozi mmekọrịta